मेक्सिकोको वफादार कुकुरको कहानी सामाजिक संजालमा भाइरल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मेक्सिकोको वफादार कुकुरको कहानी सामाजिक संजालमा भाइरल
डिसी नेपाल , २७ चैत्र २०७५
मोन्टेमोरेलस। मेक्सिकोमा एएटा रेलवे ट्रयामका एक व्यक्तिको रेलले ठक्कर दिएर मृत्यु भयो । यो खबर पाएपछि पुलिस घटनास्थलमा पुग्यो । त्यहाँ जाँदा लाश नजिकै एउटा कुकुर बसिरहेको थियो । कुकुर त्यहाँबाट कुनै पनि हालतमा हट्न राजी थिएन । जो पनि नजिक जान खोज्थे कुकुरले टोक्न खोज्दै भगाउँथ्यो । पछि थाहा भयो कि मृत्यु हुने व्यक्ति त्यो कुकुरका मालिक थिए । कुकुर मृत्युपछि पनि आफ्ना मालिकको साथ छोड्न तयार थिउन । अहिले यो कुकुरको कहानी भाइरल भइरहेको छ ।
मेक्सिकोको मन्टेमोरेलसमा ५७वर्षका भिक्टर रायनाको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उनी रेलवे ट्रयाक नजिकै बसेर मदिरा पिइरहेका बेला दुर्घटनाको शिकार भएका थिए । गत हप्ताको आइतबार भएको यो घटनाको खबर पाएपछि पुलिस तत्काल घटनास्थल पुग्यो । त्यहाँ पुलिसले लाशसँग एउटा कुकुर थियो जसले कसैलाई पनि लाशको नजिक जान दिँदैनथ्यो । कुकुरलाई हटाउने कोसिसमा २ जना पुलिस अफिसरलाई कुकुरले टोक्यो ।
पछि निकै मुस्किलले पुलिसले कुकुरलाई हटायो र लाशलाई पोष्टमार्टमको लागि पठायो । स्थानीयका अनुसार भिक्टर अल्कोहलिक थिए र यो कुकुर केही वर्षदेखि उनीसँग थियो । भिक्टर जहाँ जान्थे कुकुर पनि त्यहीँ जान्थ्यो । अब भने मालिकको मृत्युपछि कुकुरलाई शेल्टर होम पठाइएको छ । सामाजिक संजालमा यो कुकुरको कहानी निकै भाइरल भइरहेको छ । युजरहरु यो कुकुरलाई एडप्ट गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
गगनलाई नेकपाका नेताको कडा चुनौती: सिसाको घरमा बसेर ढुंगा नहान्नुहोस् ।
रमेश खरेलले साथ नदिएपछि निरास ज्ञानेन्द्र शाही ।
सरकारको मुखै त्यति बैरी छ भने बाँकी शरिर के होला !
भएकाको नलेख्ने नभएकाको नाम लेख्नेः प्रधानमन्त्री ज्यु जवाफ दिनुस् ।